प्रधानमन्‍त्रीलाई विश्‍वप्रकाशको सुझाव : ‘कृपया, बाँस्कोटाको प्रवक्ता नबनिदिनुस्’ | Samajik Khabar
Home राजनीति प्रधानमन्‍त्रीलाई विश्‍वप्रकाशको सुझाव : ‘कृपया, बाँस्कोटाको प्रवक्ता नबनिदिनुस्’
प्रधानमन्‍त्रीलाई विश्‍वप्रकाशको सुझाव : ‘कृपया, बाँस्कोटाको प्रवक्ता नबनिदिनुस्’
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारका पूर्व प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाको प्रवक्ता नबन्न सुझाव दिएका छन्। अनुसन्धान प्रहरीले, बहस वकिलले र फैसला न्यायाधीशले गर्ने भएकाले यसको भारी नबोक्न शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्।
शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘ पुर्व प्रवक्ताको वर्तमान प्रवक्ता नबनिदिनोस् कृपया ! अनुसन्धान प्रहरीले,बहस वकिलले र फैसला न्यायाधीशले गर्ने हो। अरुको कर्म पनि यहाँले नै गरे प्रधानमन्त्रीको भारी बोक्न झनै गाह्रो पर्नेछ। अझ `अडियो´ को प्राविधिक परीक्षणसम्म यहाँले नै ??
ओलीले पार्टी प्रशिक्षणमा बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै अडियोमा कमिसन मागेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गरेको खबर बाहिरिएपछि शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
के भनेका थिए प्रधानमन्त्री ?
पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीले बिहीबार आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बचाउ गरेका थिए। बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै ओलीले अडियोमा कमिसन मागेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गरेका थिए।
‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ भनेजस्तो एउटा टेप प्रकरणमा अनाडी मान्छेले आरोप लगाउँदै हिँडेको छ। गोकुलले मेरा बारेमा प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो र दिनुभयो। उहाँले न्याय खोज्छु भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ स्विस दूतावासले ‘फेक’ भनिसक्यो। गोकुलले आफ्नो नाममा बात लागेको भएर राजीनामा दिनुभएको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले झुटा कुरा गरेर आन्दोलनलाई बदनाम गर्न नपाइने बताए। ओलीले भने, ‘झुटो बोल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ उनले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि यस विषयमा अनावश्यक नउचाल्लिन आग्रह गरे। ‘अरू पार्टी आफ्ना नेतालाई मुद्दा चल्यो भने सदन अवरुद्ध गर्छन्, माइतीघरमण्डला जान्छन्। हाम्रा साथीहरू आहा क्या मज्जा ! भनेर नाचेका छन्। त्यसरी खुसी हुनु पर्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले भनेको छु– भ्रष्टाचार कसैले गरेको भटिए अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु। आत्थु/आत्थु नभन्नुहोला।’
Previous articleप्रचण्डको प्रस्टोक्ति : राष्ट्रियसभामा वामदेव नै सिफारिस
Next articleआजको राशिफल : २०७६ फागुन १७ गते शनिबार